Dagaal u dhaxeeya maleeshiyo beeleed oo ka dhacay gobolka Sool - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDagaal u dhaxeeya maleeshiyo beeleed oo ka dhacay gobolka Sool
October 22, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Deegaanka Dhumay ee gobolka Sool. [Google Map]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dagaal u dhaxeeya maleeshiyo beeleed deegaanka ah ayaa maanta oo Isniin ah ka dhacay gobolka Sool, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Dagaalka ayaa subaxnimadii hore ka qarxay deegaanka Dhumay, oo qiyaastii 35 mayl dhanka koonfurta kaga beegan magaalada Laascaanood.
Waxaa laga cabsi qabaa in dagaalka uu ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh, sida ay wararku sheegayaan.
Bishii lasoo dhaafay ee September, ayaa dagaal kan lamid ah oo u dhaxeeya maleeshiyo beeleed deegaanka ah uu ka dhacay halkaas.
Isku dhacyada u dhaxeeya maleeshiyooyinka maxaliga ah oo ka dhaca deegaanka ayaa waxaa sababa muran ka dhasha daaqa iyo biyaha iyo aanooyin.
Somalia’s federal state members meeting kicks off in Garowe
Puntland oo baaq-nabadeed u dirtay beelaha ku dagaalamay gobolka Sool
Madaxweynaha dowladda Puntland oo daahfuray dhismaha wadada u dhaxeysa Garoowe iyo Eyl
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Sabti ah magaalada Garoowe ku daahfuray dhismaha wadada u dhaxeysa magaalada Garoowe iyo degmada Eyl ee gobolka Nugaal. Isaga oo ka hadlayay munaasabada daahfurka [...]
Al-Shabaab iyo ISIS oo tartan ugu jira canshuurista khasabka ah ee ganacsatada Puntland
Boosaaso-(Puntland Mirror) Bilihii dhawaa ee lasoo dhaafay, ganacsatada magaalada Boosaaso ayaa la kulmay hanjabaadyo kaga timid Daacish, oo sidoo kale loo yaqaan ISIS. Mid kamid ah ganacsatada, oo magaciisa qariyay, ayaa bog wareedka Puntland Mirror [...]